Cele News Archives - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် ည ၁၀.၅၅ အမြန်လမ်းမိုင်တိုင် ၂၂၆ လမ်းမပေါ် အရှည် ၆ ပေ လုံးပတ် ၅ လက်မခန့်ရှိ သစ်လုံး လမ်းလယ်ခေါင်ကန့်လန့် တွေ့ရှိရာ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ မောင်းနှင်လာသည့် အဆိုတော်ထွန်းထွန်း ရှောင်တိမ်းရာ ကားအောက်ပိုင်းပျက်စီးပြီးမောင်းမရတော့၍ မျိုးဆက်သစ်လူငယ် အဖွဲ့မှကားဖြင့် မန္တလေး သို့ပို့ဆောင်ကူညီခဲ့ရဟု သိရပါသည်။
Forbes Asia ရဲ့ Digital Stars အယောက် ၁၀၀ စာရင်းမှာ စိုင်းစိုင်းနဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ပါဝင်
Forbes Asia ကနေ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ စွမ်းအားပြည့် လှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ အာရှပစိဖိတ်ဒေသ တခွင်မှ အဆိုတော်၊ အဖွဲ့၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ ရုပ်သံစတား ၁၀၀ စာရင်းကို မကြာသေးခင်တုန်းက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ တည်ရှိမှုကနေ သူတို့ရဲ့ သစ္စာရှိ Follower သန်းပေါင်းများစွာကို သက်ဆိုင်ရာ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပလက်ဖောင်းမှာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး
အဆိုတော် မီမီဝင်းဖေရဲ့ သီချင်း ၇ ပုဒ် ပါဝင်တဲ့ တကိုယ်တော် Mini Album ဟာ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ “New Normal live ကို လက်ခံနေထိုင်ရင်း ရပ်တန့်မနေကြဖို့ ဆက်လက် ရှင်သန်ဖို့၊ စိတ်ခွန်အား လူခွန်အားကို ဖြည့်တင်းပြီး အသီးသီး ရုန်းကန်လူပ်ရှားနေကြပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများစွာတွေ
(၈)လ အရွယ် သမီလေးအား ငွေ(၁)သိန်းနှင့် လိုက်ရောင်းနေသဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက ထိန်းသိမ်း၍ ပရဟိတ မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေထံ အပ်
၁၅ , ၁၁ , ၂၀၂၀ အမေက နောက် ယောက်ျားယူသွားပြီး ဖခင်မှ အရက် မူးနေချိန် (၈)လ အရွယ် သမီးလေးအား ငွေ တစ်သိန်းဖြင့် လိုက်ရောင်းနေ၍ အင်းစိန်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများမှ ကလေးနှင့် ဖခင်အား ထိန်းသိမ်းပြီး ကျမ ဆီသို့ ဆက်သွယ် အပ်နှံ သဖြင့်
အနုပညာရှင် ၄၀ ကျော် ပါဝင်သီဆိုထားကြသည့် “အောင်လံလွှင့်မည် NLD”သီချင်း(ရုပ်သံ)
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အန်အယ်လ်ဒီပါတီ အောင်နိုင်ရေး သီချင်း တပုဒ်ဖြစ်တဲ့ -“အောင်လံလွှင့်မည် NLD”သီချင်း ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကိုတော့ တေးသံရှင် သံသာဝင်းက ရေးစပ်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရက်ပ် စာသားတွေကိုတော့ တေးသံရှင် အနဂ္ဂနဲ့ ရန်ရန်ချန်းတို့က အတူဖန်တီးထားကြတာပါ။ ဒီသီချင်းထဲမှာ ပါဝင်သီဆိုထားတဲ့ အနုပညာရှင် ၄၀ ကျော်ရှိပြီး ရဲသွင်၊ ရင်ဂို၊
ငယ်ကျွမ်းဆွေ သီချင်းကို မြန်မာသံစဉ်ရောခေတ်သံစဉ်ပုံစံနဲ့ပါ သီဆိုပြပြီး ဒိုင်(၄)ဦးရဲ့ ရွေးချယ်မှုကိုရရှိလိုက်တဲ့ ခင်ရတနာစိုး
The Voice Myanmar Season(3)ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ထုတ်လွှင့်ပြသမှုရဲ့ ဒုတိယအပတ်ထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ ပရိသတ်တွေရင်နှီးပြီးသား ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ ခင်ရတနာစိုး ကဝင်ရောက်ယှဉ်ပြီုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခင်ရတနာစိုးကတော့ အသက်အရွယ်ငယ်သေးပေမယ့် မြန်မာသံရောခေတ်ပေါ်သံစဉ်တွေကို ပိုင်နိုင်သီဆိုမှုတွေကြောင့် မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီးထဲက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ရတနာစိုးကတော့ ပဲခူးတိုင်ဒေသကြီးဒိုက်ဦးမြို့ကလာရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာဖြစ်ပြီး သူဟာ The Voice Myanmar Season(3) ရဲ့ Blind Auditionမှာ ငယ်ကျွမ်းဆွေ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံက မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ခါးအသေးဆုံးမိန်းကလေး
အင်္ဂလန်နိုင်ငံက မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ခါးအသေးဆုံးမိန်းကလေး မြန်မာနိုင်ငံက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မ ဆုလှိုင်ဟာ နာမည်ကြီးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက တော့ သူမ ရဲ့ သေးငယ် လှတဲ့ ခါး အရွယ်အစားအကြောင့် အင်္ဂလန် နိုင်ငံက သတင်းမီဒီယာတွေ ထက်မှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်် ဆုလှိုင် ရဲ့ ခါးဆိုဒ်က
မြန်မာသရဲကား “The NAKED GHOST ” က နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဆု ၃ဆု ဆွတ်ခူး
ဇန်နဝါရီလတွင် ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်များအနက် Bhutan နိုင်ငံ၌ပြုလုပ်သည့် Druk International Film Festival နှင့် New York မြို့တွင် ကျင်းပသည့် New York Film Festival တို့တွင် မြန်မာသရဲကား “The NAKED GHOST” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက ဆုသုံးဆုဆွတ်ခူးခဲ့ကြောင်း သရုပ်ဆောင် ငြိမ်းချမ်းကျော်က မြန်မာတိုင်းမ်သို့
သိန်း (၁၀၀)ပေးတောင် မရောင်းဘူးဆိုတဲ့ ဆံပင်ပိုင်ရှင် မိုးကုတ်သူ
ရောင်းမလား ခဏခဏ လာမမေးပါနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဆံပင်ကအသက်မို့ သိန်း(၁ဝဝ) ပေးတောင် မရောင်းပါဘူးဆိုလိုက်တဲ့ မိုးကုတ်သူလေးပါ။ သူ့ရဲ့ဆံပင်ဘယ်လောက်ရှည်လဲဆိုတာတော့ ပုံလေးတွေသာ ကြည့်လိုက်ကြပါ။
အဆိုတော် ဝိုင်ဝိုင်းရဲ့သီချင်းသစ် ‘စိတ်သစ်လူသစ်နှစ်သစ်’ တေးသီချင်း
မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာ အဆိုတော် ဝိုင်ဝိုင်းရဲ့ သီချင်းသစ်တပုဒ် ထွက်ရှိလာပါတယ်။ “တူ တူ တူ တူ တူ တူ…. တူ တူ တူ တူ တူ တူ… ရေ့ရေ့ရေ့ရေ့… တူ တူ တူ တူ တူ တူ…. တူ တူ တူ
ဇာဂနာ ဒဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ နိုင်ငံ့ အရေး (4,913)
အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်မှု နှင့် COVID ကပ်ရောဂါ (3,965)
လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်းမှ ရွှေတုံးများ နှင့် နိုင်ငံခြားငွေများ ခိုးမှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရမိ (3,147)
ကပ်ရောဂါကို လက်နက်သဖွယ် အသုံးချနေတဲ့ စစ်ကောင်စီနှင့် မြန်မာ့အရေးအတွက် အမေရိကန်၏ နိုင်ငံရေး ၊ စစ်ရေး အကြပ်ကိုင်မှု့ (2,884)
မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ် မိန်ဗလာ တောင်က ဂျပန်ရတနာသိုက် ရှာဖွေတွေ့ရှိ (2,842)